၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေး အသစ် အတွက် တရုတ် ၏စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဒေါ်လာ ၂ ၁၇ သန်း ရရှိ မည် - Pandaily
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေး အသစ် အတွက် တရုတ် ၏စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဒေါ်လာ ၂ ၁၇ သန်း ရရှိ မည်
Feb 18, 2022, 12:22ညနေ 2022/02/18 14:20:55 Pandaily
ေပက်င္း ေစ်းကြက္ သုေတသီ ITjuzi က ဗုဒၶဟူး ေန႔မွာ2021-2022 တရုတ် စီးပွားရေး စွမ်းဆောင် မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီရင်ခံစာ။ အဆိုပါ စာရွက်စာတမ်း TMT (နည်းပညာ, မီဒီယာ နှင့် ဆက်သွယ်ရေး), အင်တာနက်, နောက် မျိုးဆက် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ, ဇီဝ ဆေးဝါး, စွမ်းအင် အသစ်, ပစ္စည်း အသစ် များနှင့် high-end ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အပါအဝင် စီးပွားရေး နယ်ပယ် သစ် အတွက် ဖြစ်ပေါ် တိုးတက် မှု၏ In-depth ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ၏စီးပွားရေး ရှယ်ယာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ in တွင် အရောင်းအ ၀ ယ် ပေါင်း ၆၈ ၈၄ ခု ရှိခဲ့ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း ၂၁ ခု ကိုအဓိက ထားပြီး အဆင့်မြင့် နည်းပညာနှင့် အင်တာနက် ကဏ္ sectors များ တွင်စုစုပေါင်း ယွမ် ၁. ၃ ၇၄ ထရီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ၁၆. ၈ ဘီလီယံ) ပါဝင်ပြီး စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့သည်။
တိကျသော နယ်ပယ် များ၏ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် မှုနှင့် AI သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အပူ ဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်း နှစ်ခု ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ် ပတ်လုံး အရောင်းအ ၀ ယ် ၁၀၀၀ ကျော်နှင့် စုစုပေါင်း ရန်ပုံငွေ ယွမ် ဘီလီယံ ၃၀၀ ခန့်ရှိသည်။
ကဏ္ sub ခွဲ တစ်ခုစီတွင် ဇီဝ ဆေးဝါး နှင့် ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ ကဏ္ sectors များသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အများဆုံး အရောင်းအ ၀ ယ် ဖြစ်ပြီး ၆ ၁၉ နှင့် ၅ ၇၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အရောင်းအ ၀ ယ် အသီးသီး ရှိပြီး အခြား ကဏ္ sub ခွဲ များ ထက်များစွာ သာလွန် သည်။
ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ က် ေတာ့လည္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့က် သြားတယ္။ ဥပမာအားဖြင့် K12 ပညာရေးနှင့် ရပ်ရွာ အုပ်စု ၀ ယ် ခြင်း (CGB) တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုသည် ၂၀၂၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒုတိယ နှစ်ဝက် တွင် Guangfa ဘဏ် ၏အခြေအနေ သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့သည်။ လက်ရှိ တွင်ဤ ကဏ္ of ၏ ငွေကြေး ပမာဏသည် အခြေခံအားဖြင့် အောက်ခြေ တွင်ရှိသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အမြင့်ဆုံး ရန်ပုံငွေ ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ၃၀ ကို AI ၊ စွမ်းအင် အ သစ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ မောင်းနှင်မှု နှင့်စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ်များ ကိုအဓိက ထားခဲ့သည်။
အမြင့်ဆုံး မှာ Chongqing Ant Consumer Finance Corporation ဖြစ်ပြီး China Ant Group ၏ စားသုံးသူ ဘဏ္ department ာရေး ဌာန ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ယွမ် ဘီလီယံ ၃၀ ရရှိခဲ့သည်။ J & T Express သည် နှစ်စဉ် ရန်ပုံငွ ေဒေါ်လာ ၄. ၅၅ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး တတိယ နေရာတွင် Prosperity Select ဟုလည်း လူသိများသော Prosperity Select သည် နှစ်စဉ် ရန်ပုံငွ ေဒေါ်လာ ၃. ၃ ဘီလီယံ ရှိသည်။ ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုတွင် SVOLT, SenseTime နှင့် Deepshire တို့ပါဝင်သည်။
ထို့အပြင် Tencent Investment သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အတက် ကြွ ဆုံး ကော်ပိုရိတ် အကျိုးတူ အရင်းအနှီး (CVC) အဖွဲ့အစည်း အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိ နေပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင် အရောင်းအ ၀ ယ် ၂၀ ၇ ခု-ယမန်နှစ် အလားတူကာလ ကထက် ၉၇ ခု တိုးတက်ခဲ့သည်။ Xiaomi နဲ့ Bytedance ကတော့ ဒုတိယ နဲ့ တတိယ နေရာမှာ ရပ်တည် နေပြီး ပြည်တွင်း အရောင်းအဝယ် ၆၉ ခု နဲ့ ၅၁ ခု အသီးသီး ရှိနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:China VC Weekly: VC နှင့် Tencent ၏ ဥရောပ လှုပ်ရှားမှုများကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထောက်ခံ သည်
၂၀၂၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Bytedance ၊ Xiaomi နှင့် B Station တို့၏ ပြည်တွင်း အရောင်းအ ၀ ယ် များသည် ၄ ၅၊ ၂၈ နှင့် ၂၉ အသီးသီး တိုးတက်ခဲ့ပြီး အရှိန်အဟုန် ကိုပြသသည်။ အခြား CVC အဖွဲ့အစည်း များသည် ၂၀ ထက်နည်းသော တိုးတက် မှုများနှင့် Hubei Xiaomi Changjiang စက်မှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၏ အရောင်းအ ၀ ယ် အရေအတွက် ပင် ကျဆင်းသွားသည်။
လွတ်လပ်သော အကျိုးတူ မြို့တော် အဖွဲ့အစည်းများ၏ စည်းကမ်း ချက် များ၌, 2021 ကာလအတွင်း ထိပ်တန်း မူလတန်း စျေးကွက် ငွေပေးငွေယူ ပမာဏ သုံးခု Sequoia တရုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံခန့်ခွဲ မှု LLP, GL Ventures နှင့် Matrix Partners, အသီးသီး 268, 164 နှင့် 153 ကုန်သွယ် ပမာဏ အသီးသီး ရှိကြ၏။ ထိပ်တန်း 10 ထူထောင် VC ကို အဖွဲ့အစည်း များလည်း Shunwei Capital ကို, Shenzhen Capital ကို Group မှ Co., Ltd မှ, IDG Capital ကို, Cowin Capital ကို, 5Y Capital ကို, Addor Capital ကို, Zhen ရန်ပုံငွေ ပါဝင်သည်။
China Daily: Logistic, Robotics ႏွင့္ ခြဲစိတ္ပစၥည္း
ျပီးခဲ့ေသာအပတ္က တရုတ္ႏိုင္ငံ Windhink သတင္းဌာနသည္ Logistic Industries New YQNLINTEL အတြက္ အၾကီးမားဆံုးေသာ ရန္ပံုေငြ သန္း ၁၀၀ ကို ထပ္မံရရွိခဲ့ျပီး ေဟာင္ေကာင္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ Gaw Capital Partners က ရန္ပံုေငြ သန္း ၄၃၀ ကို ျပီးစီးေစခဲ့ကာ စက္ရုပ္လုပ္ငန္းစုၾကီး MegaRobo အတြက္ ေဒၚလာ ၆၅ သန္း ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံခဲ့ျပီး Suzhou IntoCare Medical Field အတြက္ ရန္ပံုေငြ သန္း ၁၅ သန္း ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ သည္။
Chip developer များသည် round B ရန်ပုံငွေ အတွက်ဒေါ်လာ ၁၅. ၇ သန်းကျော် အသေးစား ဖန်တီး မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ အနေဖြင့် အရင်းအနှီး အဖြစ် ပါ ၀ င်သည်
Zhuhai Mimicro Investment က သောကြာ နေ့တွင် ၎င်းသည် Round B ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ခဲ့ပြီး ယွမ်သန်း ၁၀၀ ကျော် (ဒေါ်လာ ၁၅. ၇ သန်း) ရရှိ ခဲ့သည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ ဤ အလှည့် အပြောင်း ကို SummitView Capital က ဦး ဆောင်သည်။